War saxaafadeed – Guddiga amniga qaranka ee dawladda federalka oo shiray, awaamirna soo saaray. – Radio Daljir
War saxaafadeed – Guddiga amniga qaranka ee dawladda federalka oo shiray, awaamirna soo saaray.
Muqdisho, March 12 – Gudiga Amniga Qaranka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen xaaladda amni ee dalka, iyagoo soo saaray go?aano arrinkaasi quseeya.
Kulankaan ay gudiga amniga Qaranka isugu yimaadeen oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayna ka soo qayb galeen guddoomiyaha Baarlamaanka KMG ah Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, R/wasaare C/weli Max?ed Cali Gaas, xubo ka tirsan gudigaasi oo ay ka mid yihiin Wasiiro, Taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo Booliska Soomaaliyeed, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa looga arrinsaday arrimaha amniga dalka, waxayna ka soo saareen go?aanadaan.
1.In markale dib loo bilaabo lana dardar geliyo ololahii ku saabsanaa ka saaridda dadka guryaha dowladda ee ay sharci darrada ku deganyihiin.
2.In duleedka Muqdisho laga hirgeliyo xero weyn oo lagu baxnaaninayo qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho, si halkaasi la isugu geeyo, islamarkaana ay u sahlanaato in berito dib loogu celin karo goobihii ay markii hore ka soo barakaceen.
3.In Guddoomiyayaasha Gobollada iyo degmooyinka laga saaray Al-qaacidada Soomaaliya ay xafiisyada hayaan, muddo sadex bilood ah oo si ku meel gaar ah, kaddibna la qaban doono doorashooyin xilalkaasi ku saabsan.